Fanitsiana sy fandefasana -
FAMPANDROSOANA (iraisam-pirenena sy Etazonia)
Ny ora fiasana dia 5-6 andro fiasana. Vao mainka tombanana fotsiny izany ary mety ho lava kokoa na hihoatra lavitra noho ireo andro 5-6 voatonona. Ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra dia TSY miasa andro.
Nibian-doha Nubian, fanakatonana, ary volom-bolo dia mila fotoana maromaro hikarakarana, na aiza na aiza eo amin'ny 5-12 raharaham-barotra noho ny fotoana ilàna ny mamorona ny peratra, ary ny famaranana. Tsy manana volom-borona (kofehy marefo / hodi-kofehy) ao anaty tahiry isika. Misaotra anao noho ny faharetanao!
Mandritra ny vakansy ary famarotana / fampahafantaranas Ny andro fiasana amin'ny 2-3 dia nijanona amin'ny fanitsiana noho ny haben'ny baiko Na izany aza dia mety haharitra hatramin'ny herinandro amin'ny fahatarana izany.
Tracking numbers dia halefa any amin'ny baiko rehetra aorian'ny fotoana efa nahazatra. Halefanao amin'ny alàlan'ny mailaka avy amin'ny paypal ny lahatahirinao.
Mandefa ny baiko rehetra amin'ny alàlan'ny United States Postal Service (www.USPS.com) amin'ny alàlan'ny mailaky ny mailmena MailNail 2-3 rehefa vita ny fanodinana.
Ny Hair Extensions amin'ny natiora dia TSY tompon'andraikitra amin'ny rehetra kitapo very na simba Indray mandeha ny fanamarinana dia voamarina fa voavaly. Tsy manonitra ireo mpividy amin'ny vidim-panavotana rehetra izay very na nangalatra noho ny toe-javatra tsy nampoizina izay tsy azo ihodivirana ny "Natural Hair Extensions". Azafady azafady fa alefa any amin'ny toerana azo antoka ianao. Ho avy ny baiko rehetra $ 50 mendrika fiantohana raha te-hiantoka ny volanao manontolo ianao, miangavy anao amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny laharana nomena anao aorian'ny fividianana.
Ny baiko amin'ny $ 250 na mihoatra dia hahafeno fepetra maimaim-poana! Ny fifidianana ny handoavana ny entana dia tsy hahatonga azy ho tonga haingana.
Azafady azafady ny baiko amin'ny daty hanome anao fotoana ampy mba handray ny baikoo alohan'ny ny volonao fanendrena. Ny fotoana fanaraha-maso dia tsy azo atao ny mivoatra na maneho azy. Na izany aza dia azo aseho ny fotoana fandefasana entana.
Ny baiko dia alefa amin'ny alàlan'ny USPS (www.USPS.com) taorian'ny fotoana nahazoana alalana.
Ny fandefasana dia faran'ny 25 $ - $ 65 ho an'ny baiko iraisam-pirenena.
Ny fonosana rehetra tsy voavaly ary naverina tamintsika dia hahazo ny famerenana ho an'ny entana ihany. Ny saram-pitaovana dia tsy haverina intsony.
Miankina amin'ny tanindrazanao ny fonosanao dia mety ho ambany ny haba na ny saram-pandraharahana rehefa tonga. Ity fiampangana fanampiny ity dia tsy lany amin'ny fiampangan'ny MNHE na ny fanjakana any Etazonia. Azafady azafady amin'ny masoivohonao eo an-toerana mba hahitana raha toa ka mihatra aminao io sanda io. Raha izany dia takiana aminao ny handoavana izany karama izany mba handraisanao ny entanao.
Ny Hair Extensions amin'ny natiora dia TSY tompon'andraikitra amin'ny rehetra kitapo very na simba Indray mandeha ny fanamarinana dia voamarina fa voavaly. Tsy manonitra ireo mpividy amin'ny vidim-panavotana rehetra izay very na nangalatra noho ny toe-javatra tsy nampoizina izay tsy azo ihodivirana ny "Natural Hair Extensions". Azafady azafady fa alefa any amin'ny toerana azo antoka ianao. Ho avy ny baiko rehetra $ 100 mendrika fiantohana raha te-hiantoka ny volanao manontolo ianao, miangavy anao amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny laharana nomena anao aorian'ny fividianana.
Jona 20, 2017 amin'ny 5: 03 am
Moa ve ny androm-pihetseham-behivavy 5-6 voatazona, raha toa maka fotoana lavalava, azoko atao ny mahazo alalana.
Ny Staff MNHE
Jona 20, 2017 amin'ny 10: 23 am
Tsy mpanafintohina izy io, fa tombanana. Mety ho lava kokoa na kely kokoa noho ny ora fanodinana izany. Na izany aza dia manao izay tsara indrindra vitantsika isika mba hahazoana ny baiko rehetra ao anatin'io fotoana io. 🙂
May 8, 2018 amin'ny 5: 53 am
Ny volo amin'ny volo dia mitaky fotoana mitovy?
Manana volom-bolo koa ve ianao? Hitako izany ao amin'ny tranokalanao ho an'ny baiko, angamba novakiako diso izany saingy nihevitra aho fa tsy hita izy io ... plz toro
May 8, 2018 amin'ny 10: 35 am
Salama. Tsy misy ny fonosana apetaka momba ny 1 - 2 andro fiasana.
Jolay 16, 2018 amin'ny 11: 10 am
Noho izany, inona no manombantombana ny fikarakarana sy ny fandefasana entana ho an'ny volom-bidy nampiasaina ho an'ny ovy sy kofehy?
Desambra 27, 2018 amin'ny 5: 55 am
Miankina amin'ny baikontsika ankehitriny izany. Matetika dia herinandro 1-2 hatramin'ny fotoana nomaninao mba hatolony eo am-baravaranao.
Eny, ampio aho amin'ny lisitry ny mailakao